हाम्रा दाँत किन पहेँला हुन्छन्, जानी राखौँ – SidhaRekha
२०७४ पुष ३०, आईतवार २०:३२ January 14, 2018 Sidharekha Online
दाँत हाम्रो शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । यसले हाम्रो शारीरिक सौन्दर्यलाई झल्काएको हुन्छ । आफ्ना दाँत सेता र चम्किला होउन् भनेर कसले चाहन्न र ? विभिन्न ब्राण्डका टुथपेस्ट प्रयोग गर्नेदेखि डेन्चर व्हाइटनरको प्रयोग गर्नेदेखि दन्त चिकित्सकसँग परामर्शसम्म । हामी के के गर्न पछि पर्दैनौ दाँत सेता पार्न । कतिपय अवस्थामा सेता र चम्किला दाँतहरूका लागि बनेको भनेर विज्ञापन गरिएको टुथपेस्टले दिनमा दुई पटक ब्रस गर्दा गर्दै पनि दाँतको पहेँलोपन यथास्थितिमै रहिराख्यो भने खल्लो लग्नु स्वाभाविक हो ।
कफी राम्रो पी पदार्थ हो । झन् जाडोमा कफी पिउनुको त मज्जा नै फरक ! तर यसले पनि दाँत पहेँलो पार्दछ । खासमा दुई समयको कफीबीच पर्याप्त समयान्तर आवश्यक छ ।
अघिल्लोयसरी छानिन्छन् राष्ट्रियसभा सांसद
पछिल्लोअर्कैको गल्तीले ओक्सानाको भाग्य चम्कियो, हात पारिन् ५० लाख डलर